Soo degso POSKY Boeing 777-200 Xirmooyin FSX & P3D - Rikoooo
downloads 196 265
Cusboonaysiiyay 18 / 01 / 2013 waafaqsan P3D : Halkan waxaa ah, Boeing 777-200 (Project Open Sky) oo ah nooca '3D' oo tayo yar dhif ah! Xirmadan ayaa ah mid dhammeystiran waxaana ku jira 3D cockpit Virt foju oo leh wejiga '2D panel' cabirrada ku habboon, matoorlada dhawaqa codka ku saleysan iyo waxyaabo kale oo badan oo la yaab leh. Xirmooyinka loogu talagalay oo lagu tijaabiyo rikoooo loogu talagalay FSX-SP2 /P3D. Dhibcaha waxaa iska leh POSKY.
Baastada dalwaddu waa qurux qaali ah, moodada dibadu waa super macquul ah, xirfad badan. Hadana taasi taasi kuma filneyn, waxaan ku daray 4 dameer oo kala ah: Air France, Emirates, American Airlines iyo British Airways oo lagu daray labo moodel iyo labo nooc oo dhawaaqyo ah: Rolls-Royce Trent ee Emirates iyo American Airlines, General Electric iyo Air France British Airways. Tan add-on wuxuu lamid yahay midka Fleet Air France ee FS2004 laakiin waafajiyay inuu la shaqeeyo FSX oo lagu daro cusbooneysiinta iyo dhawaqyada dheeriga ah iyo qoraalka.
Haddii aaladaha ka yihiin oo dhan madow, waxay isticmaalaan aaladaha Recovery si loo xaliyo dhibaatada: hubi ikhtiyaarka "System Files": Riix halkan